Blog-Kubvarura: Iyo Yega-Inovimbika Post | Martech Zone
Blog-Kubvarura: Iyo Yega-Inovimbika Post
Muvhuro, July 9, 2007 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Yangu inotevera tippee ndiRyan uyo anomhanyisa bhizimusi blog, inonzi Iyo Yega Reliant Post. Iyo Yega-Reliant Post iri bhurogu nezve maitiro ekuita mari nepamhepo bhizinesi repamba uye dzimwe pfungwa dzakanangana nazvo. (Ini ndakabata iwo wekupedzisira mutongo kubva ku About peji.)
Heano mazano ako eBlog:
Doh! Ini ndakangosvipwa here? Pandakatanga kucherechedza iro zita renzvimbo neaya ese mahedheni, ndiyo yekutanga pfungwa yakandirova. Mushure mekunge ndavaka tsinga yekudzvanya-kuburikidza, ini ipapo ndakawana inonzwisisika saiti. Ndakanga ndanetseka kutanga, zvakadaro!
Unogona kuda kunyatsofunga nezvekutsvaga zita idzva renzvimbo. Izvo zvakati - hapana chikonzero chekurasa chero chinzvimbo chauinacho parizvino. Ingo tanga kuburitsa ino domaini uye uchishandisa nyowani yako saiti. Aya ndiwo maonero angu ese, hongu!
Pane chimwe chinhu chinonakidza chiri kuitika neako dhizaini sheet. Iyo tsoka yakasara yakatarisana uye iyo yepakati (zvemukati) div haimhanye kureba kweiyo peji kune iyo tsoka. Ndiri kutora fungidziro, asi ini ndinofunga iwe unogona kuve neyakaipa yekuvhara div mamaki kutenderedza (> / div>) pane peji rako hombe. Mamwe mapeji anoita seanopa nenzira kwayo.
Heino yakanaka… iwe waizviziva here kuti MaInjini Ekutsvaga haatsvaki zvese zvirimo papeji rewebhu? Ivo vanodhonza zvemukati kubva kumusoro kweiyo peji kuti vaone mazwi akakosha uye vanyorwe iwo zvakakodzera. Kana iwe uchida kuve nezviri mukati kutyaira yako yekutsvaga injini kuiswa, ita shuwa yekusundira zvemukati kumusoro kweiyo peji. Mune ako marongero, iwe unonyatsoisa ese maviri mabara epamberi pamberi pezvako zvemukati! Pasina kukuvadza dingindira rako zvachose, iwe unofanirwa kukwanisa kufambisa zvemukati div pamusoro pemativi emativi uye wotanga kunongedzera izvo zvemukati zvakanyanya zvakanyanya.
Iwe waita basa rakanaka rekuziva yako yekudyisa kero mune yako yepadivi asi ini ndawana goof inogona kukukuvadza iwe! Mumusoro wako pane seti yezvimwe zvinongedzo zvinonongedzera kune yako RSS feed. Mabhurawuza anoshandisa iyi imwe chinongedzo kuratidza iyo "RSS" bhatani mavari kuti iwe unyore zviri nyore. Dambudziko nderekuti chinongedzo chinongedzo ndiyo yako yepamoyo feed kero (kune zvakare chinongedzo kune ichi mune rako reruboshwe sidebar inenge hafu-nzira pasi). Unogona kunge uine vanhu vazhinji vakanyoreswa kune yako saiti kupfuura iwe zvaunofunga nekuti ivo havasi kuyerwa nayo Feedpress.
Kugadzirisa musoro, tsvaga iyi mitsara mitatu:
Uye chitsiva neichi:
Ini ndaizongodzima zvekudyidzana zvinongedzo kuruboshwe sidebar sezvo vanhu vanozoiwana ine chekudya chiratidzo kana kuburikidza nebrowser.
Misoro yekubata inobata - kwete yevaverengi chete asiwo neinjini dzekutsvaga. Misoro yemaposita ako ndeye h3 nepo iwo misoro yezvikamu zvako zveparutivi zviri h2. Pane mukana wakanaka wekuti maInjini ekutsvaga akakuisa pamusoro peiyo temu Recent Comments pane Ita Mari neContext Ads. Iwe unozofanirwa kushandura yako dhizaini sheet uye yako theme kuti ugadzirise idzi nyaya.
Uri kundibaya nekuisa chinongedzo kumusoro chinoti "Ndibate". Pandinodzvanya pane izvo, ndinounzwa kune peji kwandisingakwanise kukubata iwe! Doh! Ini ndinofunga fomu rekuonana raizotaridzika rakakwana mune iro peji!
Ndokumbirawo uteedzere pane iri basa uye uve nechokwadi chekuverenga yangu imwe Blog-Kubvarura kwePGA Auctions, kunyanya zvine chekuita nemarobhoti.txt uye sitemap.xml. Ini ndinotenda iwe unogona zvakanyanya kuvandudza yako yewebhu kuvepo uye yekutsvaga injini kuvapo nemazano mune ayo posvo!
Izvo zvinofanirwa kukuchengetedza iwe kubatikana kwechinguva! Ndatenda nekundirega nditarise blog yako kunze! Ini handifunge kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti yakawanda sei dhizaini dhizaini uye dhizaini inogona kutamba muKutsvaga Injini Kugonesa. Inoshanda pamwe neyangu saiti zvakati wandei saka ndinofarira kupfuudza matipi ayo mumwe munhu akandidzidzisa!
Maitiro ekuitisa yako Blog Kutapurwa
Kana iwe uchida yako Blog Kubviswa, ingo tevera iwo mafambiro pane yangu Blog Kubvisa Post.
Tags: atomu 0.3mabhurogi mazanoKero yekudyisamusoro wekudyisa keroRSSrss 0.92rss 2rss chinongedzo
Tsananguro yaJobho yeKushambadzira VP
Blog-Kubvarura: Yangu Blog Mudzidzisi